Deg Deg:-Madaafiic Muqdisho lagu soo garaacay & Musharax la kulansan 100xildhiban+Sheekh Sharif Iyo Farmaajo.. | Kobciye24.com
Deg Deg:-Madaafiic Muqdisho lagu soo garaacay & Musharax la kulansan 100xildhiban+Sheekh Sharif Iyo Farmaajo..
Wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa xiranm waxaana aad loo adkeeyey amniga magaalada iyadoo saacado keliya ay ka hadhsan yihiin doorashada madaxweynenaha Soomaaliya.
Dhinbaca kale waxaa magaalada ka socda shirar u dhexeeya qaar ka mid ah musharrixiinta iyadoo qaar kalena ay ka hadheen tartanka, oo ay tanaasuleen.
Xildhibaanada baarlamanka ayaa iyaguna aad u mashquulsan oo marba musharax la kulmaya, ayada oo la isku dayayo in la kasbado codadkooda ka hor doorashada maalinta berri ah.
Wararkii kale ee ugu danbeeyay ayaa sheegaya in madafiic lagu gaaracay qeybo kamid ah degmooyinka magaalada Muqdisho.
Muqdisho wali waxa ka soconaya olalaha doorashada iyo xiligii ugu danbeeyay ay xildhibanada ay u kala tagayeen musharixiinta.
Mid kamid ah kuwa olalaha wax ka wada ayaa Kobciye24 u sheegay in musharax Shariif Shekh Axmed uu yahay qof isku kalsoon uuna u muuqdo qof soo bixi doona iyadoo ay xildhibanada Barlamaanka ka jawaabayaan guuxa shacabka.
Amaanka dhinaciisa ayaa bari la filayaa inaysan dhicin wax isku socod gaadiid ama gaariba.